छिमेकी राष्ट्रको दाजोमा नेपाल कति पछाडी, ५५ मिटर को पुल बनाउन नेपालमा बर्षौ समय लाग्ने तर ५५कि.मी. पुल बनाउन चाही यती छिट्टै कसरी सम्भव ? - सुदूरखबर डटकम
छिमेकी राष्ट्रको दाजोमा नेपाल कति पछाडी, ५५ मिटर को पुल बनाउन नेपालमा बर्षौ समय लाग्ने तर ५५कि.मी. पुल बनाउन चाही यती छिट्टै कसरी सम्भव ? हेर्नुहोस चीनले समुन्द्रमा बनाएको पुलको फोटो फिचर
बेइजिङ । संसारको सबैभन्दा लामो समुद्री पुल यातायातको लागि तयार भएको छ। यो चीन र हङकङबीच सडक यातायातको लागि अक्टोबर २४ मा खोलिनेछ। चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्हुआका अनुसार, पर्ल रिवर एस्चुरी के लिंगदिंग्यांग जल क्षेत्रमा निर्माण गरिएको ५५ किलोमिटर लामो पुल विश्वको सबैभन्दा लामो सामुद्रीक पुल हो।
यो परियोजना, जुन डिसेम्बर २००९ मा सुरु भएको थियो, यसमा चीनले अर्बौ डलर खर्च गरेको जानइएको छ । हालैं मात्रैं चीनले मानव निर्मित संसारको सबैंभन्दा ठुलो विमान निर्माण गरेको थियो । यो हंङकङ देखि जुहई सम्म यात्रा समय पहिले तीन घण्टा लाग्ने गरेकोमा अब मात्रैं आधा घण्टामा पार गर्न सकिनेछ । यसबाहेक, यसले पर्ल नदीको मुखमा अवस्थित अन्य शहरहरू पनि जडान गर्नेछ।
यसको विशेषता हो
हंङकङ, जुहई र मकाउ प्वाइन्टसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले भने कि पुल निर्माणको क्रममा लगभग चार लाख टन इस्पातको प्रयोग गरिएको थियो। सम्पूर्ण परियोजनाको लगभग १०।७० अरब डलर खर्च भएको छ भने पुलको लम्बाई करीब ६।७ किमी लामो सुरंग जल निर्माण भएको छ । पुलको कुल लम्बाइ ५५ किलोमिटर छ । ३५ किलोमिटर पुल समुद्रमा निर्माण गरिएको छ। यो प्रति घण्टा १०० किलोमिटरमा सवारी चलाउन सक्षम हुनेछ। हंङकङ देखि जाहैबाट यात्रा, जुन पहिले तीन घण्टाको थियो, अब केवल ३० मिनेटमा पूरा हुनेछ। पुलको निर्माण ९ वर्ष पछि पूरा भयो। एजेन्सी